साहित्य | नेपाली जनता :: Nepali Janta: Nepali News Portal
अचानक उसको फोनको घण्टीले ऊ फेरि असहज भई र म रोकिन बाध्य भएँ। उसको फोनको घण्टी लगातर बजिरहयो र उसका कठोर आँखाहरू त्रासले अलि बिचलित जस्ता देखिए। ऊ फोन उठाउन बाथरूम भित्र पसि। उसले सानो स्वरमा हेलो भनेकी थिई…
एक युवतीको आवाज मेरो कानमा ठोक्कियो । म अफिस जानका लागि गाडी कुरिरहेको थिएँ । उनको कुरा सुन्दा अचम्म लागेन । बरु…
६ महिनाअगाडि एकदिन बजारबाट फर्किंदा सौभाग्यवश तिम्री स्वास्नीसित भेट भएको थियो ।
त्यसबेला मैले देखेँ— एउटी पच्चीस–छब्बीस वर्षकी युवती काँधमा ह्यान्डब्याग, देब्रे हातमा बट्टाबट्टीले भरिएको नाइलनको तारको झोला र दाहिने हातमा जूटको…
कथा: पहेंलो गुलाफ
कभि साम ढले तो मेरे दिल में आजा ना
म झसंग ब्युझिएँ । बाहिर…
समग्रमा यत्ति सोध्छु– तिमी कहिले आउने ? चाँडो आऊ । यो खालीपना र तिम्रो जिम्मेबारीको कार्यबाहक कामले अति पिल्सिएको छु । मायाको त कुरै छाडौं, बल्ल थाहा हुँदैछ तिमिसँगको अल्पविरामको…
जुनेलीले एकपछि अर्को लाजका पर्दाहरू खोल्दा…
तिहारको समय थियो । छोरी उषा मामाघरमा थिई । जुनेलीले आशालाई फोन गरी । ‘आज गाईतिहार । भोलि भाइतिहार तर टीको भने यो साल लाउन नमिल्ने भो । दाजु जुठोमा हुनुन्च । टीका नलाए पनि भोलि दाजुकोमा जान्चु…
बिहान उठ्ने बित्तिकै…
पूर्वको राजनीतिबारे बुझ्ने गतिलो पुस्तक
काठमाडौं । झापाका तीर्थ सिग्देलले ‘पूर्वको राजनीति’ नामक पुस्तक बजारमा ल्याएका छन् । झापाली पत्रकारितामा विगत दुई दशकदेखि क्रियाशील सिग्देलको पुस्तक ‘पूर्वको राजनीति’ केहि दिन अघि विमोचन गरिएको थियो । पुस्तक विशेषगरी राजनीतिसँग सम्बन्धित रहेको लेखक सिग्देलले बताए ।
सबैभन्दा खुसीको क्षण ? आमा बन्दा !
सरस्वती प्रतीक्षा सेलिब्रटी लेखिका हुन् । कविता कृति ‘यद्यपि प्रश्नहरु’, ‘बिम्बहरुको कठघरा’ र ‘बागी सारङ्गी’मार्फत विद्रोही चेत पस्केकी सरस्वती प्रतीक्षा फुटकर लेख लेखेर पनि चर्चामा आउँछिन् । सामाजिक सञ्जालमा समाजका बेथितिमाथि बहस गर्न रुचाउने सरस्वतीको हालै प्रकाशित कृति ‘नथिया’बाट…